खेल संसार – Page6– Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
७ आश्विन २०७७, बुधबार ०३:२१ English
विश्व चर्चित फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्वारेन्टाइनमा २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:०५
एजेन्सी, २९ फाल्गुण । कोरोना भाइरसको सन्त्राका कारण इटालियन क्लब युभेन्ट्सबाट खेल्ने पोर्चुगलका फुटबलर क्रिस्टियानो रोनाल्डोलाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ । युभेन्ट्सका उनका टिममेट ड्यानिए रुगानीलाई कोरोना भाइरसको संक्रमण भएपछि रोनाल्डोलाई पोर्चुगलले क्वारेन्टाइनमा राखेको..
साविक विजेता लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगबाट बाहिरियो २९ फाल्गुन २०७६, बिहीबार ०८:४६
एजेन्सी, २९ फाल्गुण । युरोपियन च्याम्पियन्स लिगको साविक विजेता लिभरपुल यस सिजन अन्तिम १६ बाटै बाहिरिएको छ । बुधबार राती भएको खेलमा एट्लेटिको मड्रिडसँग ४–२ गोल अन्तरले पराजित हुँदै लिभरपुल च्याम्पियन्स लिगको क्वाटरफाइनल पुग्नबाट बञ्चित भएको हो । लिभरपुल सन् २००६ पछि च्याम्पियन्स..
त्रिभुवन आर्मी आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार १८:१८
पोखरा, २७ फल्गुण । नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब पोखरामा जारी आहा रारा गोल्डकप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । मंगलबार संकटा क्लबलाई ३–० गोल अन्तरले हराएँदै आर्मीले सेमिफाइनमा मनाङ मर्स्याङ्दीसँगको भेट पक्का गरेको हो । आर्मीको जितमा सुधिल राइले खेलको १४ औँ मिनेटमा नवयुग..
कोरोनाको कारण विश्वकपका छनौट खेल स्थगित, नेपालसहित ४६ देश प्रभावित २७ फाल्गुन २०७६, मंगलवार ०८:४१
काठमाडौँ, २७ फाल्गुण । कोरोना भाईरसको कारण फिफा विश्वकपको छनौट खेल प्रभावित भएको छ । फिफाले सन् २०२२ को विश्वकप फुटबलको लागि हुन लागेको एसियाली छनौट खेलको मिति सारेको हो । फिफाले एसियाली फुटबल संघसँग छलफल गरेर प्रतियोगिता अन्तर्गतका खेलहरु रोक्ने निर्णय गरेको हो । फिफाले मार्च २३..
रियल बेटिससँग हार्‍यो रियल मड्रिड २६ फाल्गुन २०७६, सोमबार १७:१३
एजेन्सी, २६ फाल्गुण । स्पेनिस ला लिगा फुटबलमा रियल मड्रिड रियल बेटिससँग पराजित भएको छ । आइतबार रातिको खेलमा मड्रिड बेटिससँग २–१ ले पराजित भएको हो । बेटिसको जितमा सेडनेइ रेचल र क्रिस्ट्यिन टेलोले एक–एक गोल गर्दा मड्रिडका लागि करिम बेन्जेमाले एक गोल गरेका थिए । बेटिससँग पराजित भएसँगै..
महिला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि अस्ट्रेलियलाई २५ फाल्गुन २०७६, आईतवार १७:५०
एजेन्सी, २५ फाल्गुण । आईसीसी टी–२० महिला विश्वकप क्रिकेटको उपाधि अस्ट्रेलियाले जितेको छ । अस्ट्रेलियाको मेलवर्नमा आइतबार भएको फाईनलमा भारतलाई ८५ रनले हराउँदै अस्ट्रेलियाले उपाधि उचालेको हो । टस जितेर पहिले ब्याटिङ रोजेको अस्ट्रेलियाले निर्धारित २० ओभरमा चार विकेटको क्षतिमा..
ईपीएल स्थगित, अब कहिले ? २२ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:०७
काठमाडौँ, २२ फाल्गुण । एभरेष्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) क्रिकेट स्थगित भएको छ । चैत १ बाट सुरु हुने तय भएको प्रतियोगीता कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी संक्रमणका कारण स्थगित गरिएको हो । ईपीएलको यो सिजनमा बिग बोस क्रिस गेलसहितका स्टार खेलाडीहरु आउने पक्का भएको थियो । ईपीएलका प्रमुख अमिर..
एसीसी टि–२० मा नेपालको पहिलो जित २१ फाल्गुन २०७६, बुधबार १४:३१
काठमाडौँ, २१ फाल्गुण । एसीसी इस्टर्न रिजन टि–२० क्रिकेटमा नेपालले पहिलो हात पारेको छ । बुधबार भएको खेलमा नेपालले आयोजक थाइल्यान्डलाई ९ विकेटले पराजित गरेको हो । थाइल्यान्डले दिएको ६७ रनको झिनो लक्ष्य पछ्याएको नेपालले ५.३ ओभरमै १ विकेट गुमाएर भट्टाएको हो । नेपालका लागि ओपनर कुशल..
दोस्रो राष्ट्रपति रनिङ शिल्डको उपाधि गौरीशंकर मावि रामेछापलाई १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १८:०२
रामेछाप, १७ फाल्गुण । रामेछापको रामेछाप नगरपालिका स्तरीय ‘दोस्रो रास्ट्रपति रनिङ शिल्ड प्रतियोगिता’ गौरीशंकर माविले जितेको छ । नगर भित्रका ११ वटा माध्यमिक विद्यालयले सहभागीता जनाएको प्रतियोगिता शुक्रबारबाट सुरु भएको थियो । प्रतियोगीतामा गौरीशंकर माविले २० स्वर्ण, १६ रजत र ८..
एसीसी इस्टर्न रिजन टि–२०ः मलेसियासँग हार्‍यो नेपाल १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १६:१४
काठमाडौँ, १७ फाल्गुण । थाइल्याण्डमा सुरु एसीसी इस्टर्न रिजन टि–२० क्रिकेटको पहिलो खेलमा नेपाल मलेसियासँग २२ रनले पराजित भएको छ । मलेसियाले दिएको १५५ रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपालले १९ ओभर ५ बलमा सबै विकेट गुमाएर जम्मा १३२ रन मात्रै बनाउन सक्यो । नेपालका लागि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल र..
सन्दीप बने ट्‍वान्टी–२० क्रिकेटमा सय विकेट लिने पहिलो नेपाली खेलाडी १७ फाल्गुन २०७६, शनिबार १३:०३
काठमाडौँ, १७ फाल्गुण । युवा लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने ट्वान्टी–२० क्रिकेटमा सय विकेट पूरा गर्ने पहिलो नेपाली बलर बनेका छन् । आज शनिबार इस्टर्न रिजन प्रतियोगिताअन्तर्गत मलेसियाविरुद्धको खेलमा विकेट लिँदै सन्दीपले सय विकेट पूरा गरेका हुन् । सन्दीपले ७५ खेलमा १०१ विकेट लिएका छन्..